मतदान अधिकृतलेनै धाँदली गरेपछि अर्घाखाँचीमा जनताले मतपेटिका फुटाएर फाले, सुरक्षाकर्मीले ताली पिटे !
ARCHIVE, POLITICS » मतदान अधिकृतलेनै धाँदली गरेपछि अर्घाखाँचीमा जनताले मतपेटिका फुटाएर फाले, सुरक्षाकर्मीले ताली पिटे !
अर्घाखाँची- अर्घाखाँचीमा जनताले मत पेटिका फुटाएका छन् । संदीखर्क नगरपालिकाको मतदान केन्द्र, वार्ड नम्बर ५ मथुरा माविमा भएको निर्वाचनमा निर्वाचन अधिकृत सुरेन्द्र अधिकारीले धाँदली गर्न खोजेको भन्दै स्थानीयले मतपेटिका फुटाएका हुन् ।
हस्ताक्षर नै नगरी मतपत्र बाँडेको भन्दै स्थिति बिग्रिएको थियो । घटना पछी मतदान स्थगित भएको छ । बाँकी जानकारी आउन बाँकी छ । अचम्मको कुरा त के छ भने जनताले मतपेटिका फुटाउंदा केहि सुरक्षा कर्मीले नै ताली पिटेका थिए ।